Madaxweyne Qadaafi Oo Ka Digay Madaxbanaanida Koonfurta Soodaan Inay Fursad Siin Karto Somaliland | Araweelo News Network (Archive) -
Madaxweyne Qadaafi Oo Ka Digay Madaxbanaanida Koonfurta Soodaan Inay Fursad Siin Karto Somaliland
Libya(ANN)Madaxweynaha dalka Libya, Moammar al-Qadafi, oo ka hadlayey shirka dalalka Carabta uga socda magaalada Sirte ee dalkiisa, ayaa ka digay codbixinta Koonfurta Soodaan inay horseedi doonto gobollo badan oo ka tirsan qaaradda Afrika inay ka go’aan dalalkooda, isagoo
tusaale u soo qaatay Somaliland.
Shacabka Koonfurta dalka Sudan ayaa bisha January ee sanadka soo socda laga qaadi doonaa codbixin uu kaga tashanayo aayahiisa (referendum), taasoo loo badinayo inuu ku dooran doono madaxbanaani uu kaga madaxbanaado dalka intiisa kale.
Qadafi ayaa sheegay in haddii ay shacabka Koonfurta dalka Soodaan u coddeeyaan madaxbanaani ay arrintaasi ku dayan doonaan gobollo badan oo ka tirsan dalal ku yaal qaaradda Afrika, sida Somaliland, Saxaraha galbeed iyo kuwo kale, kuwaas oo ka go’i doona dalalka ay hadda katirsan yihiin. Ayuu yidhi Qadaafi.
Qadafi wuxuu arrinta codbixinta aayo katashi ee Koonfurta Soodaan ku tilmaamay inay la mid tahay cudurada faafa.
Dhawaaqa xiligan kasoo yeedhay Mr. Qadafi ayaa waxaa gaashaanka ku dhuftay siyaasiyiin ka tirsan Koonfurta Soodaan. Ambassador John Andruga Duku, oo hore u ahaa ergay, ayaa VOA-da u sheegay in hadalka Qadafi uu yahay isku-day uu xisbiga haya talada dalka Sudan (NCP) ugu talagalay inuu ku carqaladeeyo cobixinta aayo katashi ee shacabka Koonfurta Soodaan.
“Waxaan leeyahay xaqiiqiyan taas sal malaha, sababtoo ah xaaladda ka taagan Koonfur Sudan iyo tan Sudan way kagadisan tahay xaalad kasta oo ka jirta Afrika,” sidaas waxaa yiri Ambassador Duku.
Qadafi wuxuu carabka ku adkeeyey in go’itaanka Koonfur Soodaan uu noqon doono tusaale khatar ah, kaas oo curyaamin doona maalgashiga debedda ugu imanaya Afrika ee sida weyn loogu baahan yahay oo ay xiligan jiraan shirkado kusoo dhiiranaya inay Afrika maalgashi ku sameeyaan.
Ambassador Duku oo taas ka jawaabayey ayaa VOA-da u sheegay in shacabka Koonfurta Soodaan uu waligiiba ku noolaa cadaadiska reer Waqooyiga, taas oo uu ku tilmaamay inay sabab u ahayd dagaalkii sokeeye ee waqtiga dheer socday.
Shacabka Koonfur Soodaan ayey ka go’antahay xiligan inay ka go’aan dalka Soodaan intiisa kale, waxayna codbixinta sida weyn loo sugayo ee indhaha loogu hayaa ku beeggan tahay January 3 – 5, 2011.